Natomboka teo amin'ny Korea Avaratra sy i Russia ny serivisy fitsangantsanganana ho an'ny mpizahatany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Avaratra » Natomboka teo amin'ny Korea Avaratra sy i Russia ny serivisy fitsangantsanganana ho an'ny mpizahatany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Enga anie 18, 2017
Feriantsambo mpizaha tany iray no nahavita ny fitsangantsanganana voalohany niainga avy tao amin'ny seranan-tsambo any Korea Avaratra any Rajin ka hatrany amin'ny tanàna Rosiana, Vladivostok. Ny fisokafan'ilay zotra dia manamarika ny fikasan'i Pyongyang hampiroborobo ny fifamatorana ara-barotra sy ara-fizahan-tany amin'i Russia ao anatin'ny fihenjanana mihombo eo amin'ny saikinosy Koreana.
Ny solontenan'ny orinasam-pizahan-tany sinoa sy rosiana dia tao anaty sambo izay tonga tao Vladivostok ny alakamisy teo, hoy ny tatitra nataon'ny RIA Novosti, nitanisa ny mpandraharaha. Ny mpizahatany voalohany amin'ny fifandraisan'ny mpandeha voalohany eo amin'ny firenena roa tonta dia andrasana amin'ny herinandro ho avy, hoy ihany izy.
Ny fandefasana io zotra io dia natao "hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany isam-paritra sy ny varotra roa tonta," hoy ny kaonsily jeneraly rosiana ao an-tanànan'i Chongjin, Yuriy Bochkarev, tamin'ny masoivohom-baovao TASS.
Hanao ny dia inefatra isam-bolana ny sambo mpandeha. Ny sambo Mangyongbong koa dia voalaza fa mitondra mpandeha hatramin'ny 200 sy entana manodidina ny 1,500 taonina, hoy ny TASS.
Izay vonona ny hiroso amin'ilay sambo fitsangantsanganana Rajin-Vladivostok dia tsy maintsy mandoa $ 87- $ 101, miankina amin'ny kilasy kabine. Ny orinasa Rosiana, izay miasa amin'ny Mangyongbong, dia manolotra trano fisakafoanana, bara roa, milina fametahana, fivarotana ary sauna.
"Ny asan'i Mangyongbong amin'ny maha-mpizahatany iraisam-pirenena an'i Rajin-Vladivostok dia hitondra fandraisana anjara tsara amin'ny fampandrosoana ny fitaterana an-dranomasina sy ny fiaraha-miasa ara-toekarena ary ny fizahan-tany eo amin'ny firenena roa tonta," hoy ny Reuters nanonona ny masoivohom-baovao KCNA Koreana Avaratra.
Nandehandeha teo anelanelan'ny Avaratra sy Japon i Mangyongbong talohan'ny nandraran'i Japon ny sambo koreana avaratra tsy hiditra amin'ny rano Japoney taorian'ny fitsapana ny balafomanga Pyongyang tamin'ny 2006.
Taorian'ny iray tamin'ireo fandefasana balafomanga farany nataon'i Pyongyang tamin'ny asabotsy, nandrahona an'i Korea Avaratra ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana tamin'ny alàlan'ny sazy vaovao, namporisika azy ireo hampiato ny asany balafomanga nokleary sy balisika. Ny mpitarika Koreana Tatsimo vaovao, Moon Jae-in, dia nanameloka ireo fitsapana farany natao tany Korea Avaratra ihany koa, tamin'ny filazany fa misy ny "mety ho azo atao" amin'ny adin'ny tafika eo amin'ny firenena.